‘ज्यान ठूलो कि जागिर’ – हाम्रो देश
‘ज्यान ठूलो कि जागिर’
तर, पनि कर्मचारी त्रसित छन् भने सबैभन्दा बढी सेवाप्रवाह हुने नापी, मालपोत, यातायात र स्थानीय तहमा कर्मचारी जोखिममा छन्। कार्यालय खुलेसँगै कर्मचारीको भीडभाड बढेको छ। कर्मचारीलाई ज्यान ठूलो कि जागिर ? भन्दै काम गरिरहेछन्। ज्यान जोखिममा राखेर जागिर खानु परेको उनीहरू बताउँछन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार सुरक्षा रणनीति नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
सामान्य मास्कको भरमा सेवा दिने काम गरिएको छ। लामो समय कार्यालय नखुलेका कारण सेवाग्राहीको भीड छ। कागजात बनाउँदा संक्रमण फैलिने सम्भावना रहेको उनीहरू बताउँछन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल) गुर्जुधाराका एक कर्मचारी भने, ‘साह्रै गाह्रो छ, भीडले माक्स लगाएर काम गर्दा गुमुक्क हुन्छ, पसिनै पसिना हुन्छ। नलगाउँदा कोराना सर्ने डर।’
सिफ्ट समस्या : कर्मचारी सिफ्ट प्रणालीका कारण थप हैरानी बेहोर्नु परेको गुनासो गर्दछन्। कर्मचारी नै यो सिफ्ट प्रणाली प्रभावकारी नहुने बताउँछन्। सिंहदबारका मन्त्रालय, आयोगमा सिफ्ट प्रणाली लागू हुन सकिरहेको छैन।
लागू भएका कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन (आवातजावत) मा समस्या छ। सार्वजनिक यातायात नचलेको, दुई पांग्रेमा एकजना मात्र हिँड्न पाउने, सबै कर्मचारीलाई कार्यालयले सवारीसाधन उपलब्ध नगराएको जस्ता समस्या भएको छ। ‘सेवा प्रवाह हुने कार्यालयमा सिफ्ट प्रणालीको प्रभावकारिता त म भन्न सक्दिनँ तर मन्त्रालय र आयोगमा यसले कार्य प्रभावकारिता घटाएको छ’, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘अर्कातिर कर्मचारीलाई कार्यबोझ बढाएको छ।’
आवतजावतमा समस्या : सरकार सरकारी कार्यालय खोले पनि कर्मचारी आवतजावतमा समस्या भएको छ। सवारीसाधन नभएका र त ल्लोस्तरका कर्मचारी सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। उनीहरूलाई कार्यालय हिँडेर आउनुपर्ने बाध्यता छ। सवारी सुविधा पाएका ‘हाकिम’ को रूटमा पर्नेले सेयर गरेर आएका छन्। दुईजना मिलेर आउँभन्दा पनि जोरबिजार प्रणालीले समस्या भएको नापी विभागका एक कर्मचारीले बताए।
‘निजी सवारी नभएका कर्मचारी कसरी आउने ? मिलर आउँभन्दा पनि जोरबिजोर भन्दै पुलिसले रोक्छ’, ती कर्मचारीले भने, ‘त्यसकारणले सबै कर्मचारी अफिस आउन सकिरहेका छैनन्।’ सिंहदबारका एक कार्यालय सहयोगीले आफू २ घण्टा हिँडेर आएको बताए।